UNDP Inoti Inogona Kunyima COPAC Mari neNyaya yeMhirizhonga
Sangano reUnited Nations Development Programme, kana kuti UNDP, rinoti riri kushushikana zvikuru nenyaya yemhirizhonga iri kuitika munyika zvekuti kana mhirizhonga iyi ikaramba ichienderera mberi, ringangomisa hurongwa hwaro hwekubatsira nemari komiti yeparamende iri kutungamira kunyorwa kwebumbiro idzva remitemo yenyika yeCOPAC.
UNDP yange ichifanirwa kupa COPAC imwe mari inosvika mamiriyoni masere emadhora kuitira kuti COPAC ipedze basa rekunyora bumbiro idzva remitemo yenyika.
Asi nepamusana penyaya yemhirizhonga, zvikuru yakaitika kuChitungwiza neSvondo uko kwakarohwa vatsigiri veMDC-T nevatsigiri veZanu-PF, UNDP inoti yave kufuratidzwa moyo panyaya yekubatsira hurumende iri kutadza kupedza mhirizhonga.
Chiri kunyanya kunetsa sangano reUNDP inyaya yekuti iri kutyira kuti mhirizhonga ikaenderera mberi, zvichanetsa kuti paitwe musangano wakasununguka wevese vane chekuita nebumbiro idzva, kana kuti All Stake holders Conference yechipiri.
Musangano wekutanga wakava nemhirizhonga inotyisa mumwe kanzura weMDC-T akaguma ave kuchipatara.
Vatsigiri veZanu-PF, vachitungamirwa nemumwe wevakuru musangano revaimbove varwiri verusununguko, VaJoseph Chinotimba, vakatema vanhu nezvigubhu zvemvura uye vakaimba senzira yekuvhiringidza musangano uyu.
Mapurisa akangopeta maoko asina kana munhu mumwe chete waasunga. Mumwe wemasachigaro eCOPC vachimirira MDC-T, VaDouglas Mwonzora vanoti UNDP inoti haisi kuzopa COPAC mari kana mhirizhonga isina kumira.
Sachigaro anomirira Zanu-PF muCOPAC, VaMunyaradzi Paul Mangwana, vanoti havana kunge vasumwa nezvekuda kuramwa kweUNDP.
Asi vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika, uye vachishanda nesangano reNational Constitutional Assembly, VaBlessing Vava, vanoti UNDP yaita zvakanaka nekuti hainga shande nevanhu vanoita zvemhirizhonga.
Hurukuro naVaBlessing Vava